Izindaba-Rech Chemical Co.Ltd
Ukusetshenziswa kwe-sulfate eyindayo kusimende
I-Ferrous sulfate monohydrate isetshenziswa ngokuyinhloko njenge-ejenti yokwehlisa embonini kasimende ukuze kuzuzwe okuqukethwe kwe-Cr (VI) engaphansi kuka-2 mg / L. Ngefomu le-monohydrated engu-30%, i-sulfate ene-ferrous iyinhloko esetshenziswa emakethe kasimende ukunciphisa i-chromium enama-hexavalent. Lo mkhiqizo uyindlela ethembeke futhi ehlanzeke kunazo zonke abakhiqizi bakasimende abangayisebenzisa maqondana nezinye izinketho emakethe.
UMBONISO ISAZISO SOKULIBaziseka
Ngenxa yobhadane lwe-COVID-19, imikhawulo yezokuvakasha, kanye nokungaqiniseki okuqhubekayo emhlabeni wonke, i-EUROTIER 2020 neVIV ASIA 2021 ziguqula ikhalenda layo lombukiso ukuze livikele imibukiso yangaphakathi kwezifunda ngesikhathi esifanele sika-2021.
I-NEW WEBSITE VERSION OF RECH CHEMICAL
Ukuhlinzeka ngamakhasimende asezingeni eliphakeme futhi asebenza kahle, i-RECH CHEMICAL ivuselele inguqulo entsha yewebhusayithi kusukela manje kuqhubeke. Ngibheke phambili ekusekelweni okuvela kumakhasimende njengokujwayelekile. Sizohlala sinikezela ngezinsizakalo ezihamba phambili.
I-Rech Chemical Co. Ltd.
IBalixiangxie E1-12F NO.459, uFurong Road Changsha Hunan China
[i-imeyili ivikelwe] [i-imeyili ivikelwe]